Igama lelinye izingubo Abaklami labesifazane abaningi abadumile baziwa kakhulu ngo-2002. Kwathi emveni kokuba njalo Helli Berri, winner esigabeni "Umlingisikazi Kuhle" waya uthole statuette osemqoka "Oscar" ingubo ekhangayo ishayiwe njengezimila esesidlangalaleni bafune ehholo, futhi izigidi ababukeli owayegade kokwethula umklomelo ifilimu ngesikhathi izikrini TV. actress American wakhetha emcimbini Elie saab, ngokugqoka nangokuziphatha kusihlwa ngaphandle imikhono, ehlanganisa bodice esobala nge efekethisiwe zikanokusho ezimibalabala, isiketi eside eyenziwe taffeta burgundy ne loop wenza ukwaziswa okufanayo.
Le dress kwaba zikanokusho kunazo futhi ezimibalabala izingubo emcimbini. Iphinde wenza wengqephu Elie saab, ogama indlela eya empumelelweni oye waqhubeka iminyaka engaphezu kwengu-20, edume kakhulu.
Njengoba ayezalelwe Lebanon, Elie saab, njengoba ingane waqala ukubonisa isithakazelo emsebenzini wabo wesikhathi esizayo, futhi ngo-1981 waqala ukutadisha amakhono design e-Paris. Ngemva konyaka, umfana oneminyaka engu-18 ubudala weza emuva Beirut, lapho livula studio encane, okuyinto eyaba isinyathelo sokuqala ukuba eziphakemeyo Haute Couture. Ngokushesha it wadedelwa ukuqoqwa DEBUT of Elie saab, ogama igqoka sasidalelwe izithunywa zomphakathi okusezingeni eliphezulu. izinto okukhethekile, isandla efekethisiwe, iqoqo lace, amaparele nezinye Decor ocebile - konke lokhu eladonsa ozinikezele edume kunazo yezwe. Ekuqaleni kwawo-90 sika ku Beirut lokuthunga esitolo Baqala ukwamukela oda ejwayelekile kusukela abayithandayo French futhi Swiss lokusungula we umklami young.
Ukuze iqoqo lokuqala ngaphandle Lebanon Elie saab saboniswa inhloko-dolobha yase-Italy (1997). Ngo-1998, ukuqoqwa wethulwa Milan ukulungele-to-bafake. Indalo Ibonisa King Lebanese Fashion Monaco ukungezwa ku abayithandayo ithalente lakhe Princess Stephanie. Lokhu kwalandelwa kokunqotshwa abanolwazi yeParis ezweni fashion. Salon lokuqala Arabhu umklami Paris lavulwa ngo-2000.
Ngemva kwesikhashana, House Elie saab waba ilungu egcwele Syndicate Ngemfashini High - inhlangano yodumo futhi onegunya European fashion-umkhakha. Kwabe sekuthi ngo-Paris, enkabeni European wengqephu eLebanoni ethulwa omunye brilliant kunazo amaqoqo zabo.
Namuhla, Elie saab - omunye ethandwa kakhulu abaklami e amakhosazana Middle Eastern nezinkanyezi okunjengalokho lokuqala, ezifana Christina Aguilera, Beyoncé, Catherine Zeta-Jones, Sarah Jessica Parker nabanye.
Yena - umenzi wemilingo owayehlonishwa kudala ukukhanya, ongaqondakali futhi emangalisayo enhle wedding izingubo Elie saab.
Ngenxa ubuhlakani of ngalé kwezindaba izingubo Chic ngempela kahle ukugcizelela zonke izinzuzo a sibalo zesifazane. Senzelwe emikhosini umshado, ababegqoka izingubo zikanokusho futhi romantic Uyi wobuciko weqiniso futhi wadonsa umoya njengokungathi nangomdlandla zonke ngubani ezimiselwe ukubona umakoti phandle. Minyaka yonke, kudayiswa ayizinkulungwane 1 kusihlwa futhi abangaba ngu-200 ingubo yomshado kusuka Elie saab - umklami odumo emhlabeni. Marc Elie saab ezihambayo ngempumelelo kule fashion umkhakha sibonga Izimbali Ezikhangayo bezinto zobuhlalu, ingxubevange ocebile imibala, kubangela izindwangu zikanokusho, wezandla okukhethekile futhi, yebo, umcabango esisuka, ugqozi kanye ithalente eziyingqayizivele umsunguli wayo.
Ngikhohlwe iphasiwedi ku-Skype. Kanjani ukuba zilulame?